Birdie: AI-Inotungamirwa Kutsvaga Kwemusika | Martech Zone
Iyo firehose yedata iyo yemagariro midhiya inogona kupa haina kurongeka uye yayo yakaoma kuwana ruzivo rwakakosha kubva mairi pasina imwe mhando yehungwaru. Birdie inoshandura mamirioni ezvekutaura, wongororo, uye dzimwe hurukuro dzepamhepo kuita yakarongeka, inoshanda yevatengi mazano ayo anobatsira kushambadza zvikwata kuita nekukurumidza, nekubudirira sarudzo.
Birdie ndiyo indasitiri yekutanga yakazara AI-based Insights-as-a-Service (IaaS) chikuva chakagadzirirwa zvakanangana nekubatsira maCPG zvigadzirwa senge Samsung neP & G vanzwisise mamirioni emaonero evatengi, kushandura isina kugadziriswa data kuita nzwisiso dzinoitika.
Nekushandisa AI uye echisikigo mutauro kugadzirisa, Heino a Video izvo zvinotsanangura kuti Birdie ari sei kudzorerazve kutsvagisa kwemusika.
Pari zvino, kutungamira zvigadzirwa zvevatengi zvepasi rose muCPG seSamsung neP & G vari kushandisa chikuva cheBirdie kufanotaura mafambiro echikwata, kutarisira matambudziko ezvigadzirwa, uye kuwana mikana yekusimudzira mumakiyi makuru ekutengesa, maitiro ayo denda re COVID-19 rakakurumidza sezvo maricho ari kumanikidzwa gadzira matsva ekutengesa kana kunzwisisa kushandura maitiro evatengi munzira dziripo.
Mhinduro yaBirdie iri kubatsira makambani kunzwisisa ruzivo rwevatengi rwekutenga, kugadzira Consumer Kunzwisisa iyo inogona kushandiswa munzvimbo dzinoverengeka dzekambani yako.
Consumer Kunzwisisa - Famba nemabhirioni e data revatengi kubva kune akati wandei masisitimu akarongedzwa nenzira inoita kuti uone chinhu chikuru chinotevera uye nekushandura iyo nzwisiso muchiito chisina basa, zvichiita kuti zvive nyore kuratidza iyo ROI yeVatengi Insights. Ruzivo kubva kuna Birdie rwunosvika kusvika makumi matanhatu neshanu% nekukurumidza kupfuura kutsvagisa kwetsika kwemusika.
Mabatiro evatengi - Enzanisa uye unzwisise mashandiro anoita maTevhisi ako maTevhisi achienzaniswa nevakwikwidzi vakakosha uye kunyange vakaroorana vanokosha, uye dzidza maitiro eVatengi Zvakaitika munzira dzakasiyana neAI-yakavakirwa kuongororwa kwenzwi-re-mutengi data. Kutsvaga kweBirdie kunogona kusanganisa zana muzana yemakero uye mameseji
Kushambadzira & Kutaurirana - Tsvaga vateereri vakanaka uye zvavanofarira zvigadzirwa, hunhu hwechigadzirwa, uye makwara ekuita kwavo sarudzo dzekutenga. Wongorora zvaunogona uye kusakwana kwevakwikwidzi vako kuti vagadzire makwikwi akasarudzika ekushandura vamwe vatengi. Makambani anoshandisa Birdie ari kuwana 3x yakakwira shanduko kubva kumunhu mushandirapamwe
Innovation & Chigadzirwa Kuvandudza - Tora mukana kune izvo vatengi zvavanofarira uye zvavasingadi nezve chaiwo maratidziro ako- uye vako vakwikwidzi '- zvigadzirwa, kubva pakurongedza kusvika kuravira. Dzidza zvavanofunga kuti zvinoshayikwa kubva mumusika uye tangisa zvigadzirwa zvinobudirira. Makambani ari kushandisa Birdie kutema Innovation kutenderera nguva ne1 / 4.
Unleash the Power of AI and go over Market Market to get deep, granular data pamusoro peizvo vatengi vanofunga nezve yako brand, zvigadzirwa, masevhisi, uye vakwikwidzi kuti vakurumidze kuziva uye kuwedzera mikana yekukura.
Dzidza Zvakawanda Nezve Birdie Solutions
Tags: aibirdieskunzwisisa kwevatengikuvakwanjere sebasakutsvakurudza misikachigadzirwa chinobudirira